Budata IP Camera Viewer maka Windows
Budata IP Camera Viewer
Free Budata maka Windows (19.45 MB)
Budata IP Camera Viewer,
Ihe nlele igwefoto IP bụ ihe bara uru na ntụkwasị obi nke emere iji nyere gị aka inyocha ọtụtụ igwefoto site na adreesị IP.
Site nenyemaka nke mmemme a, ị nwere ike ịtọlite ​​sistemụ nlekota IP gị nefu nime nkeji. Ị nwere ike ijikwa igwefoto ị ga -etinye nakụkụ ụfọdụ nke ebe ọrụ gị, ebe a na -adọba ụgbọala ma ọ bụ ụlọ site notu ebe. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike iji ọrụ mbugharị na mbugharị na igwefoto dị ugbu a.
Na -akwado ihe karịrị ụdị igwefoto IP IP 1500 dị iche iche, mmemme ahụ na -arụ ọrụ nenweghị nsogbu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwefoto USB niile. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike hazie njirimara vidiyo nke igwefoto ị na -ele, gbanwee mkpebi, mezie ọnụego etiti.
Ị nwere ike ịhazigharị ntụle nlele nke onye na -ekiri igwefoto IP dị ka akụkụ si enweta onyo dị mma mgbe igwefoto dị nakụkụ ma ọ bụ gbanyụọ axis ya. Onye na -ekiri igwefoto IP, nke bụ mmemme bara uru na nke na -aga nke ọma, bụkwa nefu. Ị nwere ike budata ma nwalee ya ugbu a.
IP Camera Viewer Ụdịdị
Nha faịlụ: 19.45 MB
Mmemme Mgbanwe Adreesị MAC Technitium bụ ngwa efu ị nwere ike iji gbanwee adreesị MAC nke ihe...
Ares, nke bụ otu nime faịlụ kachasị amasị, egwu, vidiyo, foto, sọftụwia na ngwaọrụ nkekọrịta...
Webdị notu Web Player bụ free 3d egwuregwu ọkpụkpọ na-enye ohere ka ndị ọrụ na-agba ọsọ egwuregwu...